Realme Band dia manambara antsipiriany alohan'ny hisehoany amin'ny 5 martsa | Androidsis
Ny marika sinoa Nikasa ny hanolotra fitaovana vaovao i Realme amin'ny 5 martsa amin'ny hetsikao, fa tsy ho ianao irery no aseho an'izao tontolo izao. Ny mpanamboatra dia maniry ny hiditra tanteraka amin'ny tontolon'ny smartwatch miaraka amin'ny fanombohana fehin-tànana vaovao miaraka amin'ny fanampiana fanampiny ho an'ireo mpankafy fahasalamana.
Ny tarika Realme dia iray amin'ireo filokana mazava manolotra vokatra mitovy amin'ny Xiaomi Mi Band, Huawei Band na olon-kafa toa ny Samsung's Watch Watch. Noho ny haben'ny dial dia mitovy kokoa amin'ny roa voalohany, ny famantaranandron'ny orinasa koreana matetika dia manana habe boribory.
Realme dia nanambara tamin'ny alàlan'ny pejy Band ny sasany amin'ireo fiasa ao aminy, ao anatin'izany, ohatra, ny lokon'ny tontonana, na dia tsy fantany aza ny habeny mety. Ny efijery dia hampiseho fampandrenesana ho an'ny antso, hafatra ary fanairana, izay ataon'ny hafa.
El Ny tarika Realme mandrefy ny fanarahana torimaso, fanaraha-maso ny tahan'ny fo amin'ny fotoana tena izy ary hanohana fomba fanatanjahantena sivy. Manampia maody Cricket, iray amin'ireo fanatanjahantena miaraka amina mpihaino marobe any India, ny zavatra mahazatra dia hitranga raha ampidirina ny hafa aorian'ny fahatongavany any amin'ny firenen-kafa.
Hanana taratasy fanamarinana ny tarika Fanoherana ny rano IP68 ary ho avy miaraka amin'ny mpampitohy USB-A, noho izany dia azontsika atao ny mampiditra azy ao anaty charger mivantana. Ny faharetan'ny fizakan-tena dia tsy naseho, fa ny fahaizan'ny bateria dia mbola ho fantatra ihany ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Realme Band dia ho tonga miloko mavo, mainty ary oliva, saingy azo amboarina io raha vao novidiana tao amin'ny magazay an-tserasera Realme. Hanomboka hamidy ny Band raha vao asehon'ny orinasa amin'ny fivarotana, mpivarotra ary koa amin'ny tranokala ofisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Realme Band dia nanambara ny antsipiriany alohan'ny hanolorana azy amin'ny 5 martsa